Vaovao - Fanadihadiana ny tsena fanondranana PVC ao an-trano amin'ny tapany voalohan'ny taona 2020
Ny birao mihantona rindrina ivelany an'ny PVC
Mpiambina zorony PVC
Fanadihadiana ny tsena fanondranana PVC ao an-trano amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020
Tamin'ny tapaky ny taona voalohany, ny tsena fanondranana PVC eto an-toerana dia voakasiky ny anton-javatra maro samihafa toy ny valan'aretina anatiny sy avy any ivelany, ny tahan'ny fiasan'ny orinasa ambony sy ambany, ny vidin'ny akora, ny logistika ary ny antony hafa. Mikorontana ny tsena ankapobeny ary mahantra ny fanatanterahana ny fanondranana PVC.
Nanomboka tamin'ny volana febroary ka hatramin'ny martsa, voakasiky ny fizaran-taona, tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny Fetiben'ny Lohataona, ny mpamokatra PVC ao an-toerana dia manana taham-piasana avo kokoa ary fampitomboana avo kokoa ny vokatra. Taorian'ny Fetiben'ny Lohataona, tratry ny valan'aretina, sarotra ho an'ireo orinasan-tsambo afovoan-tany ny fampitomboana ny taham-pamerenan'ny asa, ary ny fangatahana tsena amin'ny ankapobeny dia nalemy. Nidina ny vidin'ny fanondranana PVC eto an-toerana. Noho ny fihemoran'ny tahiry ao an-trano dia tsy misy tombony miharihary ny fanondranana PVC raha oharina amin'ny vidiny anatiny.
Nanomboka tamin'ny volana martsa ka hatramin'ny aprily, teo ambany fisorohana sy fanaraha-maso mahomby ny valan'aretina an-trano, nihatsara tsikelikely ny famokarana orinasan-tsambo, saingy ambany sy tsy marin-toerana ny tahan'ny asa eto an-toerana, ary nihena ny fitaky ny tsena. Ny governemanta eo an-toerana dia namoaka politika hampirisihana ireo orinasa hamerina ny asa sy ny famokarana. Mikasika ny fitaterana any ivelany, ny ranomasina, ny lalamby ary ny fitaterana an-dàlana dia niverina miverina amin'ny laoniny, ary ny fanemorana ny fandefasana sonia tany am-piandohana koa dia navoaka. Ara-dalàna ny fangatahana any ivelany, ary ny resaka fanondranana PVC eto an-toerana no resahina matetika. Na dia nitombo aza ny fangatahana tsena sy ny volan'ny fanondranana raha oharina tamin'ny vanim-potoana teo aloha, dia voafetra ihany ny fifanakalozana tena izy.
Nanomboka tamin'ny volana aprily ka hatramin'ny Mey dia nahitana vokatra voalohany ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valan'aretina anatiny, ary voafehy tsara ny valan'aretina. Mandritra izany fotoana izany, henjana ny trangan'aretina pesta any ivelany. Nilaza ireo orinasa mifandraika fa tsy milamina ny kaomandy ivelany ary tsy matoky tena ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny momba ny orinasa mpanondrana PVC eto an-toerana dia India sy Azia atsimo atsinanana no lohalaharana, raha India kosa dia nandray fepetra hanidiana ny tanàna. Ny fangatahana any Azia atsimo atsinanana dia tsy mandeha tsara, ary ny fanondranana PVC any ivelany dia miatrika fanoherana sasany.
Nanomboka tamin'ny volana Mey ka hatramin'ny volana Jona dia nisondrotra be ny vidin'ny solika iraisam-pirenena, izay nahatonga ny fitomboan'ny teny nalaina avy amin'ny etilena, izay nitondra fanohanana tsara teo amin'ny tsenan'ny etilena PVC. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasan-tsolika plastika ambany dia nanohy nampitombo ny asany, niafara tamin'ny fihenan'ny lisitra, ary nitombo hatrany ny tsenan'i PVC toerana. Ny fitanisana ireo kapila ivelany avy any ivelany dia mihodina amin'ny ambaratonga ambany. Rehefa niverina ara-dalàna ny tsena anatiny dia nitombo ny fanafarana PVC avy amin'ny fireneko. Mihamalemy ny hafanam-pon'ny orinasam-panondranana PVC eto an-toerana, ny ankamaroan'ny varotra eto an-toerana, ary nikatona tsikelikely ny varavarankely fanondranana entana.
Ny ifantohan'ny tsena fanondranana PVC ao an-trano amin'ny tapany faharoa amin'ny taona dia ny lalao vidin'ny eo amin'ny tsena PVC eto an-toerana sy any ivelany. Ny tsena anatiny dia mety hanohy hiatrika ny fiatraikan'ny loharanom-bola lafo avy any ivelany; ny faharoa dia ny fikojakojana ifotony ny fametrahana PVC amin'ny faritra maro eto an-tany. India dia voakasiky ny fiakaran'ny rotsakorana sy ny asa fanorenana ivelany. Mihena, malaina ny fanatanterahana ny fangatahana amin'ny ankapobeny; fahatelo, ny firenena vahiny dia manohy miatrika tsy fahazoana antoka eo amin'ny tsena nateraky ny fiantraikan'ny fanambin'ny valanaretina.
CONSULTATION MAIMAIMPOANA 0086-13291521819
ADDRESS Qiushi Rd, Jinshanwei Town, Distrikan'i Jinshan, Shanghai, Sina.